သင့်ကလေးတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ရှိသည်။ အခုဘာလဲ - ကျန်းမာရေးပညာရေး | မေ 2022
ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးအချက်အလက် ကုမ္ပဏီသတင်း ကျန်းမာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ သတင်း ဖျော်ဖြေရေး ကျန်းမာရေးပညာရေး၊ နှိပ်ပါ သတင်း၊ ကုမ္ပဏီ, မူးယစ်ဆေးဝါးဆိုင်ရာအချက်အလက် ကျန်းမာရေး ရပ်ရွာ၊ ကုမ္ပဏီ, သတင်း
အဓိက >> ကျန်းမာရေးပညာရေး >> သင့်ကလေးတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ရှိ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?
သင့်ကလေးတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ရှိ နောက်တစ်ခုကဘာလဲ?
သင့်ကလေးတွင်ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ ရှိကြောင်းရှာဖွေခြင်းသည်ဂိမ်းပြောင်းလဲခြင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ဘာသာစကားအသစ်နှင့်နေ့စဉ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုသင်ယူရန်လိုအပ်သည့်အကျွမ်းတ ၀ င်မရှိသောနိုင်ငံတစ်နိုင်ငံသို့ပို့ဆောင်ခြင်းနှင့်တူ၏။ အချို့သောအရာများသည်အစာနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းကဲ့သို့အကျွမ်းတဝင်ရှိပုံရသော်လည်းအချို့သောဒြပ်စင်များသည်အင်ဆူလင်ကိုသောက်သုံးခြင်းနှင့်သွေးဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုစစ်ဆေးခြင်းကဲ့သို့သောအသစ်သောအရာများဖြစ်သည်။ ကလေးဘဝတွင်ဆီးချိုရောဂါရှာဖွေခြင်းနှင့်အရာရာတိုင်းကိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ဆောင်ခြင်းသည်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပြုမူပုံနည်းလမ်းသစ်တစ်ခုလိုအပ်သည်။
၎င်းသည်သင့်အတွက်ကြောက်စရာကောင်းပြီးလွှမ်းမိုးနိုင်သည် နှင့် သင့်ကလေးအတွက်
ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ သည်သင့်ကလေး၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုမည်သို့အကျိုးသက်ရောက်သနည်း။
တစ်ခါတစ်ရံလူငယ်ဆီးချိုရောဂါဟုခေါ်သောအမျိုးအစား ၁ ဆီးချိုရောဂါ (T1D) သည်သင့်ကလေး၏ခန္ဓာကိုယ်မှအင်ဆူလင်၊ အစားအစာမှဂလူးကို့စ် (သကြား) ကိုစွမ်းအင်အဖြစ်သို့ပြောင်းလဲပေးသောဟော်မုန်းထုတ်လုပ်ခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သောအခါဖြစ်ပျက်သည်။ ၎င်းမပါဘဲခန္ဓာကိုယ်သည်သွေးသကြားဓာတ်ပမာဏကိုသဘာ ၀ ကျစွာမထိန်းချုပ်နိုင်ပါ။ ထို့ကြောင့်သင့်ကလေးသည်အင်ဆူလင်ကိုပြင်ပအရင်းအမြစ်မှရရှိရမည်။ အင်ဆူလင်စုပ်စက်ဟုခေါ်သောစက်ဖြင့်ဆေးထိုး။ သို့မဟုတ်ခန္ဓာကိုယ်ထဲထိုးသွင်းနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကသွေးတွင်းသကြားဓာတ်မြင့်မားလွန်း။ မျက်စိကွယ်မှုမှသည်အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်းများအထိကြာရှည်သောကျန်းမာရေးပြproblemsနာများနှင့်ကုသမှုမခံရပါကခြေလက်အင်္ဂါပျက်စီးမှုများစွာဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။
သင်၏ကလေးသည်စားသောအခါသွေးထဲ၌သကြားဓာတ်ပါဝင်မှုနှုန်းကိုသေချာစေရန်သင်လက်ချောင်းတစ်ချောင်းမှသွေးတစ်စက်ယူပြီး၎င်းကိုစမ်းသပ်ရန် glucometer ဟုခေါ်သောကိရိယာကိုအသုံးပြုရမည်။ ရလဒ်တစ်ခုစီသည်သင်၏ကလေးသည်မည်သည့်ဂရမ်မည်မျှစားနိုင်ကြောင်း၊ အင်ဆူလင်ဆေးထိုးရန်သို့မဟုတ်သင့်ကလေးလိုအပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းမည်မျှရှိသည်ကိုလမ်းညွှန်ပေးသည်။ သွေးထဲရှိသကြားဓာတ်သည်တစ်ခုတည်းသောပြissueနာမဟုတ်ပါ။ သင်၏ကလေးသည်အင်ဆူလင်အလွန်အကျွံရှိပြီးခန္ဓာကိုယ်တွင်းအစာလုံလောက်မှုမရှိသည့်အခါသကြားဓာတ်နည်းခြင်းသည်ပြproblemsနာများဖြစ်စေနိုင်သည်။ ဒါဟာစီမံခန့်ခွဲဖို့အများကြီးပါပဲ။
မိဘများနှင့်ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူများကို၎င်းတို့ကလေး၏ T1D ရောဂါအသစ်နှင့်ဆက်ဆံသူများအားမည်သည့်အကြံဥာဏ်ပေးလိမ့်မည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မေးမြန်းခဲ့သည်။ ဒီနေရာမှာသူတို့အကြံပြုချက်တွေရှိတယ်။
ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုတွင်အစားအစာစားခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း၊ ဆေးဝါးစစ်ဆေးခြင်းနှင့်သွေးစစ်ဆေးခြင်းကိုပါဟန်ချက်ညီစေရန်ပြုလုပ်သည်။ ငယ်စဉ်ကလေးဘဝတွင်ဆီးချိုရောဂါကုသမှုမရှိသော်လည်းအလွန်ထိရောက်သောကုသမှုများရှိသည်။ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းအချက်တစ်ခုစီမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုနားလည်ခြင်းသည်သင်၏ကလေးစောင့်ရှောက်မှုကိုစီမံရန်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။
မိသားစုတစ်ခုလုံး၏ပညာရေးသည်အရေးကြီးသည်ဟု APRN၊ FNP-C၊ CDE၊ ဘုတ်အဖွဲ့မှအသိအမှတ်ပြုထားသောမိသားစုသူနာပြုလေ့ကျင့်သူနှင့်ဆီးချိုရောဂါရှိသူဆီးချိုပညာပေးသူဂျနီဖာမက်ကရက်ဒန်ကပြောကြားသည်။ ဆီးချိုရောဂါဆိုင်ရာဆောင်းပါးများကို JDRP (သို့) ADA မှ ၀ က်ဘ်ဆိုက်များတွင်ဖတ်ခြင်း၊ အကူအညီအဖွဲ့များရှာဖွေခြင်း၊
အမေရိကန်ဆီးချိုရောဂါအသင်း (ADA) က - အမျိုးအစား 1 ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှုလက်စွဲစာအုပ် အားလုံးကိုရှင်းပြရန်အခမဲ့ download အဖြစ်။ သင့်ကလေး၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့နှင့်စကားပြောပါ၊ သင်စဉ်းစားနိုင်သည့်မေးခွန်းတိုင်းကိုမေးမြန်းပါ၊ ၎င်းသည်သင့်ကလေး၏ရောဂါရှာဖွေမှုကိုအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေရန်ကူညီရန်ဖြစ်သည်။
ဆီးချိုရောဂါသည်ဥာဏ်ရည်အဆင့်တွင်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုသင်နားလည်နိူင်သော်လည်းလက်တွေ့မကျသည့်အရာသည်တစ်ခါတစ်ရံတွင်သင်၏ထိန်းချုပ်မှုအောက်မှခံစားရသောအရာများဖြစ်လာနိုင်သည်။ ဤအချိန်သည်ကလေးငယ်အတွက်သာမကမိဘအတွက်အလွန်စိတ်ဖိစီးမှုနှင့်ကြောက်စရာကောင်းသောအချိန်ဖြစ်နိုင်သည်ဟုမက်ကရက်ဒ်ကပြောကြားသည်။ ပထမ ဦး စွာအပ်သည်နာကျင်ခြင်းသို့မဟုတ်စိုးရိမ်စိတ်ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အခြားကလေးများ၏ရှေ့မှောက်၌ထိုအခြေအနေကိုကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းရန်သင့်ကလေးကရှက်ရွံ့ခြင်းသို့မဟုတ်ဝန်ထုပ်တစ်ခုလိုခံစားမိခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုသည်မျှတသောအပြုအမူဖြစ်သည်ဟုမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်နာနတ်စ်မှ Lisa Goldsmith မှပြောကြားခဲ့သည်။ သူမသမီးကို ၇ နှစ်အရွယ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည် ၎င်းသည်တိကျသောသိပ္ပံပညာမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်သင်သည်ပုံမှန်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်တစ်ခုကိုဖော်ထုတ်ပြီးပုံမှန်ပုံစံအသစ်တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိမ့်မည်။ အခြေအနေအားလုံးနှင့်သင်ပိုမိုညှိနှိုင်းလေလေကောင်းသောရက်များများလေလေဖြစ်သည်။
ကလေးများအတွက်ဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုသည်ကိရိယာများစွာလိုအပ်သည်။ ဆေးထိုးခြင်း၊ အင်ဆူလင်၊ သွေးဂလူးကို့စ်စစ်ဆေးသည့်မီတာ၊ စမ်းသပ်မှုအချပ်များ၊ အရက်များနှင့်အခြားပစ္စည်းများ။ လူအများစုကဆေးထိုးခြင်းသည်အင်ဆူလင်ကိုရနိုင်သည့်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ စမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများသည်ဂလူးကို့စ်ကိုတိုင်းတာရန်တစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်တစ် ဦး တည်းအရွယ်အစားနှင့်ကိုက်ညီသည့်အားလုံးဆီးချိုရောဂါစီမံခန့်ခွဲမှုအစီအစဉ်မရှိပါ။ ထိုးဆေးများနှင့်အတူ, ကလေးများမကြာခဏနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောတစ်နေ့လျှင်လိုအပ်ပါတယ်။ အချို့ကအင်ဆူလင်ပန့်ကိုအသုံးပြုရန်ရွေးချယ်သည်။ ၀ တ်ဆင်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်အင်ဆူလင်ကိုတစ်နေ့လုံးဖြန့်ဝေပေးပြီးဆေးထိုးခြင်းထက်ခလုတ်ကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်အင်ဆူလင်ကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါနည်းပညာတိုးတက်မှုအသစ်တွေအများကြီးရှိတယ်လို့ McCrudden ကပြောပါတယ်။ ငါလူနာထွက်ရှိရွေးချယ်မှုအားလုံးအပေါ်အသိပညာသူတစ် ဦး ဆီးချိုရောဂါပညာပေးနှင့်တွေ့ဆုံရန်အကြံပေးလိမ့်မယ်။
အင်ဆူလင်ပန့်တစ်ခုသည်သွေးဂလူးကို့စ်အဆင့်ကိုအကြံပြုထားသည့်အဆင့်များ၌ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရန်ပိုမိုလွယ်ကူစေသည် (အနီးကပ်စောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုရန်လိုသေးသည်) ။ သကြားဓာတ်စစ်ဆေးမှုကိုစဉ်ဆက်မပြတ်ပြုလုပ်သောဂလူးကို့စ်မော်နီတာ (CGM) ဟုခေါ်သောသယ်ဆောင်နိုင်သောကိရိယာတစ်ခုရှိပြီးသယ်ဆောင်နိုင်သောစက်သို့မဟုတ်စမတ်ဖုန်းသို့သွေးသကြားဓာတ်ပမာဏကိုပို့ဆောင်ပေးနိုင်သည်။ CGMs များသည်လက်ချောင်းများနှင့်မီတာများထက်ဂလူးကို့စ်အဆင့်ဆင့်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာပြသနိုင်သော်လည်းအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်းကိုယ်ခန္ဓာအတွင်းအာရုံခံကိရိယာတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်။
လွန်ခဲ့သော ၂ နှစ်ကသမီးဖြစ်သူကိုရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သောမက်ဆာချူးဆက်ပြည်နယ်၊ ဝိန်းလန်းမှ Susan Cotman ကသင့်ကလေးကိုဖြစ်နိုင်လျှင် CGM ရရှိရန်နှင့်သင့်ကလေးအားသင်အဆင်သင့်ဖြစ်ရန်အကြံပေးလိုပါသည်။ ဒါဟာစိတ်ကိုသိသိသာသာစိတ်ငြိမ်သက်မှု, ဒါပေမယ့်ငါ့သမီး၏သွေးဂလူးကို့စသူမကစားသောအစားအစာများနှင့်လေ့ကျင့်ခန်းဖို့ဘယ်လိုပိုကောင်းတဲ့ထိုးထွင်းသိမြင်မှုဆောင်ခဲ့တော်မူပြီ။ …သူမရဲ့ဂလူးကို့စ်ပမာဏကို CGM နဲ့အသေးစိတ်ကြည့်တာကလက်ချောင်းကိုပုံမှန်စစ်ဆေးတာဟာငါ့အတွက်တကယ့်မျက်လုံးဖွင့်ပေးလိုက်တယ်၊ ငါဟာအာဟာရနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်နားလည်ထားတာနဲ့သူ့ခန္ဓာကိုယ်အပေါ်ဘယ်လိုသက်ရောက်မှုရှိသလဲဆိုတာမမှန်ဘူးဆိုတာငါ့ကိုသင်ပေးတယ်။ အဘယ်သူ၏ခန္ဓာကိုယ်အင်ဆူလင်ကိုမလုပ်နိုင်တဲ့တစ်စုံတစ် ဦး ၌တည်၏။
သို့သော်အထောက်အကူပြုသောနည်းပညာရှိခြင်းသည်အစားအစာ၊ လေ့ကျင့်ခန်းနှင့်အင်ဆူလင်သောက်သုံးမှုတွင်ရွေးချယ်မှုများမှတဆင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်မှုကိုအစားမထိုးပါ။ အကြီးမားဆုံးအယူအဆလွဲမှားမှုက၎င်းကိရိယာများသည်လူနာအားလုံးအတွက်အရာရာကိုလုပ်ပေးလိမ့်မည်ဟုဆိုသည်။ လူနာသည်ပြproblemနာကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်ယူရာတွင်ကျွမ်းကျင်မှုရှိရန်လိုအပ်သည်။ ကိရိယာသည်အထောက်အကူပြုသော်လည်းလူနာသည်ရွေးချယ်မှုပြုရန်နှင့်သူသို့မဟုတ်သူမ၏ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုတွင်တက်ကြွစွာပါ ၀ င်ရန်လိုအပ်ကြောင်းသူကဆိုသည်။
၎င်းကိုရရှိသောအခြားသူများနှင့်ပြောဆိုခြင်းသည်သင်၏နေ့စဉ်နေ့သစ်နှင့် ပတ်သက်၍ သင့်အားယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်နားလည်မှုကိုပေးနိုင်သည်။ ဒါဟာလွှမ်းမိုးသောခံစားရနိုင်ပါတယ်, ဒါပေမယ့်သင်တစ် ဦး တည်းမဟုတ်ပါဘူး။ 18,400 ကလေးများနှင့်ဆယ်ကျော်သက်နှင့်အတူရောဂါနေကြသည် ဆီးချိုအမျိုးအစား ၁ နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း။ Moore McCarthy မှစာရေးဆရာမကသင့်ကိုကူညီမယ့်အဖြစ်မှန်လူတစ် ဦး ကိုရှာပါ။ တစ်ယောက်တည်းမလုပ်ပါနဲ့ Juvenile ဆီးချိုရောဂါနှင့်အတူကလေးများအားလုံးကိုမိဘ၏လမ်းညွှန် ။ သူမ၏သမီး Lauren သည်အသက် ၆ နှစ်အရွယ်တွင်လွန်ခဲ့သော ၂၂ နှစ်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
အမျိုးအစား ၁ ရှိအခြားမိဘသို့မဟုတ်အရွယ်ရောက်သူကိုရှာပါ။ သူတို့ကိုရှာတွေ့ဖို့နည်းလမ်းတွေအမြဲရှိတယ်။ သင်သည်ဒေသတွင်းရှိလူငယ်ဆီးချိုရောဂါသုတေသနအဖွဲ့ (JDRF) သို့မဟုတ် ADA ၏ဒေသဆိုင်ရာအခန်းကိုဖုန်းခေါ်ဆိုနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အခြားသူများနှင့်စကားပြောရန်သင်ရှာတွေ့နိုင်သည့်ရပ်ရွာအုပ်စုများရှိပါကသင်၏ endocrinologist ကိုမေးမြန်းနိုင်သည်။ မက်ကာသီကအွန်လိုင်းအထောက်အကူပြုအဖွဲ့အတော်များများရှိတယ်ဆိုတာကိုအသိအမှတ်ပြုပေမယ့်သူတို့ကိုတစ်ခုတည်းကိုသာအသုံးမပြုရန်သတိပေးသည်။ အွန်လိုင်းတွင်ကြောက်ရွံ့မှုများစွာရှိနိုင်ပြီး၎င်းသည်အမြဲတမ်းအချက်အလက်များအပေါ်တွင်မူတည်သည်မဟုတ်ဟုသူမကဆိုသည်။ အမျိုးအစား ၁ ရောဂါရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သူများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းသည်သင့်မိသားစုကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ဆီးချိုရောဂါသည်သင်၏ကလေးသည်အောင်မြင်နိုင်သည်ဟုထင်ခဲ့သည့်အရာများကိုပြောင်းလဲခွင့်မပြုပါနှင့်။ သူမ၏သမီးကို ၇ နှစ်အရွယ်တွင်ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက် Goldsmith မှပညာရှိအကြံပေးချက်အချို့ကိုကြားခဲ့သည်။ မနေ့က Madelyn အတွက်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များအားလုံးသည်သူမအတွက်ကျွန်ုပ်ရရှိထားသည့်မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များအားလုံးဖြစ်နေဆဲပင်ဟုသူမကဆိုသည်။ Madelyn ကိုဒီရောဂါရဲ့သားကောင်လိုခံစားခွင့်မပေးဖို့ငါအရမ်းကြိုးစားတယ်။ သူမကြိုက်သည့်အားကစားတစ်ခုရှိပါကကစားနိုင်သည်။ သူကညအိပ်စခန်းကိုသွားချင်တယ်၊ ပြီးတော့သူမနဲ့သူမဘေးကင်းလုံခြုံအောင်ပို့ဖို့နည်းလမ်းတစ်ခုကျွန်တော်တို့ရှာဖွေခဲ့တယ်။ ၎င်းသည်ကြိုတင်စီစဉ်ခြင်းနှင့်နောက်ကွယ်မှစီမံခန့်ခွဲခြင်းများကိုပြုလုပ်လိမ့်မည်။ သို့သော်သူမအလိုရှိသမျှကိုသူမကူညီနိုင်မည့်နည်းလမ်းရှာမည်ဟုကျွန်ုပ်ကိုယ်ကိုကတိပေးခဲ့သည်။
မြင့်မားသော triglycerides ကုသမှုနည်းလမ်း ၄ ခု
azelastine hydrochloride နှင့် fluticasone propionate နှာခေါင်းဖြန်းဆေး